ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားစေသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပေ - Yangon Media Group
ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားစေသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပေ
မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆
မန္တ လေးမြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားစေသည့် ယာဉ်များကြာရှည်စွာရပ်နားခြင်း၊ ယာဉ်နှစ်ထပ် ရပ်နားခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါက ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၂ အရ အရေးယူသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီမှ ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ထုတ်ပြန်သည့် အသိပေးကြေညာချက်အရ သိရသည်။
”ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းဖောက်ပြီး ရပ်နားတဲ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေကို အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတပ်ပြီး အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာ ကားအစီးရေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ အိမ်စီးကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စည်း ကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေ ပိုမိုများ ပြားလာတာကို တွေ့ရှိရတာကြာင့် အခုလိုထုတ်ပြန် ကြေညာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၂ အရ ပထမအကြိမ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးဒဏ်ကြေးငွေကျပ် တစ်သောင်းကနေ အများဆုံးကျပ် ငါးသောင်းအထိ တပ်ရိုက်အရေးယူသွားမှာပါ။ ထပ်မံဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရင်တော့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၅ အရ အနည်းဆုံးဒဏ်ကြေးငွေကျပ် နှစ် သောင်းကနေ အများဆုံးကျပ် နှစ်သိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်တစ်လအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်တဲ့အထိ ပြင်းထန်စွာ အရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဇော က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ကွမ်းယာဆိုင်များ၊ သီးစုံအချဉ်ပေါင်းဆိုင်များ၊ ဒုတ်ထိုးဆိုင်အစရှိသည့် အရောင်းဆိုင်များအ နေဖြင့် ဘီးတပ်တွန်းလှည်းဖြင့်သာ ရွေ့လျားသွားလာ ရောင်းချရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကလမ်းမကြီးများ ဘေးရှိ ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ရေ မြောင်းများပေါ်တွင် ကျူးကျော် ရောင်းချနေသူများကို စည်ပင်တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ကာ ဒဏ် ကြေးငွေ အနည်းဆုံးကျပ်နှစ်သောင်းမှ အများဆုံးကျပ်ငါးသိန်းအထိဖြစ် စေ၊ ထောင်ဒဏ်တစ်လမှ တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကို ဖြစ်စေ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် အသိပေးကြေ ညာချက်များကို မလိုက်နာသူများအား စိစစ်အရေးယူရေးအတွက် စည်ပင်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အခွန်ဌာန၊ သန့်ရှင်းရေးဌာနတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့က မြို့နယ်အလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ရာ အများပြည်သူတိုင်ကြားသည့် နေရာများသို့လည်း ရှောင်တခင်ဝင် ရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
လင်းနို့ဂူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာပေးစခန်းတွင် ပြသရန် တိရစ္ဆာန် ရုပ်လုံးသွင်းမျ??
မန္တလေးမြို့ရှိ ရေခဲစက်တစ်စက်မှ အမိုးနီးယား ယိုစိမ့်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူ ၂၅ ဦး မူးဝေ
ခရီးသည်တင်ယာဉ် ပေ ၅ဝ ခန့်အနက်ရှိ ချောင်းထဲသို့ ထိုးကျမှု မိုင်းပျဉ်းတွင်ဖြစ်ပွား၊ ငါးဦးသေ??
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလတွင် သမ္မတအပါအဝင် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့အစည်းဝင်များ အစိုးရ အဆောင်အယောင်များကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း သုံးစွဲခွင့်ရှိ
နည်းပြ ဂတ်တူဆိုကို အေစီမီလန် သက်တမ်းတိုးဖွယ်ရှိ
မကွေး တိုင်းဒေသကြီးရှိ အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် မြို့နယ်နှင့် တိုက်နယ် ဆရာဝန်မျ??
Global Times သတင်းထောက် ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြသမားတို့၏ ရိုက်နှက်စော်ကားခြင်းခံရ
”လုံးဝ အချစ်သက်သက် ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ရိုက်ချင်လို့ Now & Ever ကို ရိုက်မှာပါ” ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးန?